ဘယ်လိုက WINDOWS 10, WINDOWS7ကိုအတွက် REGISTRY ကနေ BACKUP လုပ်ထားမိတ္တူကိုဖန်တီးရန်နှင့် 8 - ဆောင်းပါးများ - 2019
ဘယ်လိုက Windows 10, Windows7ကိုအတွက် registry ကနေ backup လုပ်ထားမိတ္တူကိုဖန်တီးရန်နှင့် 8
29.12.2018 ပြတင်းပေါက် | အစီအစဉ်များ
Window Registry ပါ - ဟာ operating system ရဲ့အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဟာဒေတာဘေ့စစနစ်နှင့်အစီအစဉ်ကို parameters တွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ OS က updates များကို, ဆော့ဖ်ဝဲတပ်ဆင်, အသုံးပြုမှုလိုသလို, "သန့်ရှင်းရေး" နှင့်အချို့သောအခြားအသုံးပြုသူများ '' လုပ်ရပ်များတစ်ခါတစ်ရံစနစ်၏ချွတ်ယွင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့် registry ကိုပြောင်းလဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။
ကွဲပြားခြားနားသော Windows 10 ကိုတစ်ဦး backup လုပ်ထားမိတ္တူကိုဖန်တီးရန်ချဉ်းကပ်မှု, 8.1, ဒါမှမဟုတ် Windows7ကို registry ကိုအကြောင်းကိုဤအညွှန်ကြားချက်အသေးစိတ်များနှင့်ပြဿနာတစ်ခုဝန်သို့မဟုတ် system ကိုစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လျှင် registry ကို restore ။
registry ကို backup ကော်ပီတခုအလိုအလျှောက်ဖန်တီး
ပြန်လည်နာလန်ထူအချက်များအတွက် Registry ကို Backup တွေကို
Window Registry ပါဖိုင်များကို manual backup လုပ်ထား
registry ကို backup ကော်ပီတခုဖန်တီးဖို့အခမဲ့ပရိုဂရမ်
automatic backup လုပ်ထား system registry က
ရိုးရှင်းက Windows ကွန်ပျူတာကိုအလိုအလျောက်စနစ်ဝန်ဆောင်မှုကိုထုတ်ပေးနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် (ပုံမှန်အားဖြင့် - တိုင်း 10 ရက်တစ်ကြိမ်) ကို registry ကနေ backup လုပ်ထားမိတ္တူဖန်တီးတဲ့အခါ, restore ဖို့အသုံးပြုသို့မဟုတ်ရိုးရိုးသီးခြား drive ပေါ်တွင်တစ်နေရာတခြားကူးယူနိုင်သည့်။
ဖိုင်တွဲထဲမှာဖန်တီး registry ကိုတစ် backup လုပ်ထားမိတ္တူ ကို C: Windows System32 config ကို RegBack ထိုအခါမှ folder ကိုကနေဖိုင်တွေကော်ပီကူးရိုးရှင်းစွာ, restore လုပ်ဖို့ ကို C: Windows System32 config ကိုအကောင်းဆုံး - ပြန်လည်ပတ်ဝန်းကျင်၌တည်၏။ ထိုသို့ပြုမှမည်ကဲ့သို့သင်ယူဖို့ငါ registry ကို Windows 10 ကို restore လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာအသေးစိတ်ရေးသားခဲ့သည် (နှင့်စနစ်၏ယခင်ဗားရှင်းအဘို့သင့်လျော်သည်) ။
ဦးဝင်း + R ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်စာရိုက်ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်သော Task Scheduler (တစ် backup လုပ်ထားအလုပ် RegIdleBack အသုံးပြုမှုအလိုအလျောက်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူ taskschd.msc), ကို "Task Scheduler စာကြည့်တိုက်" ၌တည်ရှိပြီး - "Microsoft က" - "Windows ကို" - "Registry ကို" ။ သငျသညျကို manually registry ကရှိပြီးသား backup လုပ်ထားမိတ္တူကို update လုပ်ဖို့ကဒီအလုပ်တစ်ခုကို run နိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီးမှတ်ချက်: အလိုအလျောက် registry ကို back up လုပ်ထားဖို့အောက်တိုဘာလ 1803 ခုနှစ်တွင် Window များပေါ်တွင်မေလ 2018 (ဖိုင်များကိုဖြစ်စေနေသူများကဖန်တီးကြသည်မဟုတ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အရွယ်အစား0KB ဖွစျသညျ) အလုပ်လုပ်နေရပ်တန့်ထားပြီးကတည်းကပြဿနာကိုတစ်ဦးကို manual တာဝန်ပစ်လွှတ်အပါအဝင်ဗားရှင်း 1809 ခုနှစ်ဆက်ရှိနေသေးနှင့်ဒီဇင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်။ ရုံမသိရပါဘူး - ဒါကြောင့် fix လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ် function ကိုအနာဂတျမှာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေမယ့် bug ကိုဖွင့်သည်ဖြစ်စေ။
Windows တွင် backup registry အမှတ် Restore
Windows တွင်အလိုအလျှောက်ရမှတ်အဖြစ်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်း restore ကိုဖန်တီးရန်တစ် function ကိုလည်းမရှိ။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုများထဲတွင်ဆံ့နှင့် registry ကို backup လုပ်ထားနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် operating system ကိုကို (ပြန်လည်နာလန်ထူ disc ကိုဒါမှမဟုတ် OS ကိုဖြန့်ဖြူးနဲ့ bootable USB drive က / disk ထဲကအပါအဝင်ပြန်လည်နာလန်ထူပတ်ဝန်းကျင်သုံးပြီး) စတင်နိုင်ပါဘူးသော operating system ကိုပေါ်, နှင့်ဖြစ်ရပ်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးရရှိနိုင်ပါသည်အချက်များ restore ။
သီးခြားဆောင်းပါးပြန်လည်နာလန်ထူအချက်များဖန်တီးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအသေးစိတ်များ - Windows 10 ကို (ထိုစနစ်၏ယခင်ဗားရှင်းများအတွက်အမှန်တကယ်) မှတ် Restore ။
registry ကိုဖိုင်များကို manual backup လုပ်ထား
သငျသညျကို manually က Windows 10, သို့မဟုတ် Windows78 လက်ရှိ Registry ကိုဖိုင်တွေကော်ပီကူးနှငျ့သငျ restore လုပ်ဖို့လိုတဲ့အခါ backup တစ်ခုအဖြစ်သူတို့ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။ နှစ်ခုဖြစ်နိုင်သောချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး - Registry Editor ထဲမှာတင်ပို့ registry ကို။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ရိုးရိုး (သော့ဝင်း + R ကိုအယ်ဒီတာကို run ဝင် regedit လို့) ထိုအခါ "File" menu ကိုဒါမှမဟုတ် Context Menu ကအတွက်ပို့ကုန် function ကိုသုံးပါ။ တစ်ခုလုံးကို registry ကိုအပိုင်းတင်ပို့ "ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်" ကိုရွေးချယ်ပါ, ညာကိုနှိပ်ပါ - ပြည်ပပို့ကုန်။
ရရှိလာတဲ့ .reg ဖိုင်, သငျသညျနိုင်ပါတယ် "ပြေး" ဟုအဆိုပါ registry ကိုအတွက်အချက်အလက်ဟောင်းများကိုစေ။ သို့သော်ဤနည်းလမ်းကိုအားနည်းချက်များရှိပြီး:
ထို့ကြောင့် backup တစ်ခုကိုသာအပြေးကို Windows အတွက်အသုံးဝင်သည်။
သင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ပြည်နယ်သို့ပြန်လာနိုင်ရန် registry ကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်ဤ .reg file ကိုအသုံးပွုရပေမယ့်အသစ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါ (ကမိတ္တူအောင်၏ထိုအချိန်ကရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသောသူတို့အား) ကိုဖျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်မပြောင်းလဲရှိနေပါဦးမည်။
အခြို့သောအကိုင်းအခက်လက်ရှိအသုံးချခြင်းခံရပါကအမှားများကို backup တစ်ခုကနေ registry ကိုအားလုံးတန်ဖိုးများကိုတင်သွင်း။
ဒုတိယချဉ်းကပ်ပုံ - registry ကိုဖိုင်တွေကို backup တစ်ခုမိတ္တူကိုစောင့်လျက်, သငျသညျ restore လုပ်ဖို့လိုတဲ့အခါမှ - သူတို့အပျေါမှာလက်ရှိဖိုင်တွေအစားထိုးရန်။ registry ကိုဒေတာသိုလှောင်ထားကြောင်း Key ကိုဖိုင်တွေ:
file တွေကို default, SAM ကို, လုံခြုံရေး, SOFTWARE, Windows System32 Config ၏ SYSTEM folder ကို
ဖိုလ်ဒါက C ထဲမှာ NTUSER.DAT ဝှက်ထားသောဖိုင်: username Users (အသုံးပြုသူများ)
မည်သည့်သိုလှောင်မှုစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိဒါမှမဟုတ် disk ပေါ်မှာသီးခြားဖိုင်တွဲဤဖိုင်များကိုကော်ပီကူး, သင်အမြဲတမ်း OS ကို boot မည်မဟုတ်လျှင်, ပတ်ဝန်းကျင်၏ပွနျလညျထူထောငျအပါအဝင် backup လုပ်ထားသည့်အချိန်တွင်၌ရှိ၏ပြည်နယ်ဖို့ registry ကို restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
registry ကို backup ကော်ပီတခုဖန်တီးဖို့အစီအစဉ်ကို
သငျသညျကို back up နှင့် registry ကို restore လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းအခမဲ့အစီအစဉ်များကိုတစ်ဦးလုံလောက်သောအရေအတွက်ကရှိပါသည်။ သူတို့တွင်နေသောခေါင်းစဉ်:
RegBak (Registry ကို Backup ကိုနှင့် Restore) - အလွန်ရိုးရှင်းပြီး Windows 10 ကိုဖန်တီးပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူ, 8 Registry ကို Backup တွေကို,7တရားဝင်ဆိုက်ကို - //www.acelogix.com/freeware.html
ERUNTgui - အသုံးပြုရလွယ်ကူ installer ကိုနှင့်အိတ်ဆောင်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံး၏ပုံစံအတွက်ရရှိနိုင်ပါကသင်သည် Backup တွေကို (သင်အလိုအလြောကျ Task Scheduler ကို အသုံးပြု. backup တစ်ခုဖန်တီးရန်ကိုသုံးနိုင်သည်) ဖန်တီးရန်မ graphical interface တစ်ခုနှင့်အတူ command line ကို interface ကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျ site ကို //www.majorgeeks.com/files/details/eruntgui.html နိုင်ပါတယ် Upload လုပ်ပါ
OfflineRegistryFinder သင် registry ကိုလက်ရှိ system ကို back up လုပ်ထားဖို့ခွင့်ပြုအပါအဝင် registry ကိုဖိုင်တွေအတွက်ဒေတာ, ကိုရှာလေ့ရှိတယ်။ ဒါဟာသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဆော့ဖ်ဝဲ load လုပ်ဖို့ //www.nirsoft.net/utils/offline_registry_finder.html ထို့အပြင်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, သငျသညျကိုလည်းရုရှားဘာသာစကား interface ကိုများအတွက်ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
ဤအစီအစဉ်များအားလုံးကိုပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုရုရှားဘာသာစကား interface ကို၏မရှိခြင်းရှိနေသော်လည်းသုံးစွဲဖို့အတော်လေးလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ အဆုံးစွန်သောခုနှစ်တွင်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် backup လုပ်ထား restore ပြန်၏ထို option (သို့သော်သင်သည်ကိုယ်တိုင်စနစ်အတွက်အလိုရှိသောတည်နေရာအတွက် backup လုပ်ထား registry ကိုဖိုင်တွေရေးနိုငျသညျ) လည်းမရှိ။
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုထိရောက်နည်းလမ်းများပူဇော်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဆိုလျှင် - ငါသည်သင်တို့၏မှတ်ချက်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Windows 10 ကို update ကို disable လုပ်နည်း
အဆိုပါ command prompt ကိုသင်၏စီမံအုပ်ချုပ်သူကပိတ်ထားသည် - Fix ရန်ကဘယ်လို
အမှားအယွင်းများ SSD ကို disk ကိုပြည်နယ်နှင့် SMART attribute တွေစစ်ဆေးသည်လုပ်နည်း
Fix ရန်ကဘယ်လို - သင်က Windows 10 အတွက် .exe ကို run တဲ့အခါမှာအဆိုပါ interface ကိုကိုမထောက်ပံ့သလဲ?
Task Manager ကို Mac OS နဲ့အခြားရွေးချယ်စရာစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကို